UNICEF Somalia - Media centre - Shiinaha oo 2 milyan oo Doolarka Mareykanka ah ku biiriyey hawsha bani’aadamnimada ee UNICEF ay ka waddo Soomaaliya
Muqdisho, Soomaaliya, 21 Nofembar 2017 – Iyada oo abaarta dhibaatada culus ku haysa Soomaaliya aaney muuqan inay dhammaaneyso, ayaa hawsha naf-badbaadinta ee ay UNICEF ugu adeegeyso haweenka iyo carruurta ay qaaraan ku xoojisey Dowladda Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha. Qaaraanka oo 2 milyan oo Doolarka Mareykanka ah ayaa UNICEF gacan ka siin doona in ay adeeg gaarsiiso 15,000 carruur da’ yar ah oo ay hayso nafaqo-xumo aad u ba’an oo jooga gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka.
Dhibaatada bani’aadamnimo, oo ka bilaabatey xilli-roobaadyo is-xigxigey oo ay baaqdeen roobabkii, ayaa waxaa ka dhashey barokac ballaaran, cudurro dillaacay iyo nafaqo-xumo iyada oo 6.2 milyan oo qof – oo ah kalabar tirada dadka dalka – ay hadda u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo. Kuwaas oo ilaa 4 milyan oo ka mid ahi ay yihiin carruur.
“Annaga oo u sii marineyna UNICEF, waxaan rajeyneynaa in dadka ay dhibaatadu saameysey, gaar ahaan kuwa ku nool degaannada fogfog, aan gaarsiinno adeegyo naf-badbaadin ah,” ayaa uu yiri Qin Jian oo ah Danjiraha dalka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya. “Waxaa naga go’an in aan taageerno hawsha gargaarka bani’aadamnimada ee ay hoggaamineyso Dowladda Soomaaliya, waxaana ku faraxsannahay in aan UNICEF kala shaqeyneyno hubinta in la daboolo baahida kooxaha ugu nugul bulshada, gaar ahaan carruurta iyo haweenka. Wadajir, ayaan dadka Soomaaliyeed uga caawin karnaa ka gudbidda waqtigan adag.”
Tan iyo bilowgii sanadkan 2017da, UNICEF, oo la-hawlgalayaal fuliya hawsha u sii marineysa, ayaa waxaa ay nafaqo-xumo aad u ba’an ka daaweysey carruur 200,000 ka badan, kuwaas oo ku dhowaad dhammaantood ay caafimaadeen. Haseyeeshee, weli baahi weyn ayaa jirta. Sanadka soo socda gudihiisa, UNICEF waxaa ay qiyaaseysaa in ka badan 230,000 carruur ah oo ay nafaqo-xumo ba’an ku dhici karto.
Maaliyaddan ayaa gacan ka geysaneysa in 15,000 carruur ah lagu daweeyo cuntada diyaarsan ee daawada ah ee laga sameeyey lawska. Sahayda ayaa ay qaybin doonaan xarumaha caafimaadka iyo kooxaha wareega iyada oo qayb ka ah xirmo iskudhafan oo ay ku wada jiraan adeegyo caafimaad, kuwo nafaqo iyo biyo iyo fayadhowr oo la siiyo dadka ku nool degaannada ay sida ugu weyn u saameysey dhibaatada. Ilaa 120,000 carruur ah iyo hooyooyinkooda ayaa lagu gaarayaa habka adeegyada iskudhafan.
“Iyada oo looga mahadcelinayo waxtarka deegsinimada ku dhisan ee ay bulshada caalamku bixiyeen, ayaan waxaan ilaa hadda awoodney in aan baajinno macluul dhacda,” ayaa uu yiri Wakiilka UNICEF, Steven Lauwerier. “Haseyeeshee waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado gargaarka lana sii joogteeyo guud ahaan sanadka 2018ka si looga hortago in ay dad dhintaan ama ay maciishad ay burburto. Gargaarka waqtigii loo baahnaa ay bixiyeen Dowladda Shiinaha iyo dadka Shiinaha ayaa kaalin weyn ka qaadan doona badbaadinta nolosha carruurta. Waxaan ku rajoweynahay in ay tani bilow u tahay wada-shaqeyn muddo dheer socota oo waxtar leh oo ay Shiinaha iyo UNICEF kaga wada hawlgalaan Soomaaliya gudaheeda.”
UNICEF waxaa ay dhiirrigelisaa xuquuqaha iyo wanaagga ilmo kasta, wax kasta oo aan sameyneyno. Annaga oo kaashaneyna la-hawlgalayaasheenna, ayaan waxaa ka shaqeynaa 190 dal iyo dhul si aan ballanqaadkeenna ugu rogno tallaabo-qaad dhab ah, annaga oo diiradda saareyna dadaal gaar ah oo lagu gaarayo carruurta ugu nugul ee aan helin adeegga ay u baahan yihiin, si ay arrintaasi faa’iido ugu yeelato dhammaan carruurta, meel kasta oo ay joogaanba.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan UNICEF iyo hawsha ay u hayso carruurta ka eeg www.unicef.org/somalia